Dowlada Somaliya oo ka hadashay weerarkii Bariire
Sarkaal ka mid ah ciidamada Soomaaliya, Janaraal Sheegow Axmed Cali, oo maamulayay saldhigga la weeraray ee Bariire ayaa sheegay in qaar ka mid ah kooxda weerartay ay ku dileen dagaalka.
Wuxuu tilmaamay iyo militariga Soomaaliya ay guuleysteen, iskana caabiyeen weerarka Al-Shabaab ee Bariire.
"Saaka aroortii, seddax meel ayey naga soo galeen; dhinaca wobiga; dhinaca Koonfur iyo dhanka waqooyi. Ka dib way naga jabeen ka dib markii dharbaaxo culus ay ku dhacday, illaa maydooda aan meesha dhignay", ayuu yiri sarkaalka u hadlay dowladda Janaraal Sheegow ayaa tilmaamay in illaa 18 ka mid ah shabaab ay ku dileen dagaalka ka dhacay gobolka Shabellaha Hoose.
AlShabaab ayaa sheegatay in ku dhowaad 30 askeri ay ku dileen weerarka, laakiin Janaraal Sheegow ayaa beeniyay arrintaas.
Wuxuu Sheegow qiray in illaa 12 askeri ay ku dhinteen weerarka Al-Shabaab ee Bariire ay ku qaadeen saaka.
Sidoo kale wuxuu Janaraalka beeniyay in Al-Shabaab ay qaateen gawaari xerada ciidamada tiilay. Kooxda ayaa sheegatay in 11 gaarii oo ay ka mid yihiin kuwa caafimaadka ka qaateen saldhigga.
"Baabuurta waxay ahaayeen kuwa qaar kood ay haleysnaayeen, oo difaaca yaalay, oo baasuuko uu ku dhacay. Gawaarida way cuslaayeen, mid ay qarxiyeen iyo seddax kale; afar gaari baan ogahay hadda", ayuu yiri Janaraal Sheegow.
Wasiiradii hore ee Haweenka Puntland oo digniin ka bixisay Xildhibaanada la soo xulli doono
Puntland 13.08.2017. 17:46
GAROWE, Puntland- Anisa Hajimumin Wasiirkii hore ee Haweenka Puntland "Waxaa dad badan is weydiinayaan sababta aanan ugu jirin Wasiirada cusub, Walaalayaal sababtu waa hal qodob oo ah meeshii la iga rabay in aan qabiilkayga u shaqeeyo, ayaan u shaqeeyay dhama ...
Puntland oo Shidaalka hodon ku ah oo dooranaysa Madaxweyne cusub
Puntland 08.01.2019. 00:34
Somalia: Madaxweynihii hore ee Puntland oo ka dagay magalaada Kismayo
Soomaliya 13.08.2017. 16:04
Madaxweyne Gaas oo ka codasdey Issimada Puntland iney shir isugu yimadaan [AKHRI]
Puntland 24.07.2017. 20:08
Gaas oo ku wajahan caleemo saarka madaxa maamulka Galmudug
Puntland 29.05.2017. 03:25
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo Mowqifkooda cadeeyay [Sawirro]
Puntland 03.03.2018. 14:18
Puntland oo diyaarineysa in laga jawaabo bayaankii odaaysha Nugaal
Puntland 22.08.2017. 01:21